गायक पंगेनी भन्छन्,‘गाडीमा गीत बजाउन नपाईने निर्देशन अवैज्ञानिक’ – Karnalisandesh
गायक पंगेनी भन्छन्,‘गाडीमा गीत बजाउन नपाईने निर्देशन अवैज्ञानिक’
प्रकाशित मितिः २३ पुष २०७६, बुधबार १३:०७ January 8, 2020
काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायातका साधानमा अबदेखि गीत बजाउन नपाइने भएको छ। सार्वजनिक गाडीमा गीतकै कारणले दुर्घटना बढेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना मार्फत म्युजिक सिस्टम नराख्न निर्देशन दिएको छ।
यस निर्देशनका बारेमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बीजीले गीतकै कारणले दुर्घटना भएको र दुर्घटनामा कमी आउछ भने यस कुरालाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तथापी उनले संस्थागत रुपमै यस निर्देशनका बारेमा निर्णय गर्ने उनको भनाई छ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री पंगेनीले भने अध्ययन बिना नै यातायात विभागले यो निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘ हेल्लो यातायात बिभाग ! कुन अध्यनले प्रमाणित गर्यो संगीतले दुर्घटना बढायो भनेर?’
त्यस्तै पंगेनीले सार्वजनिक यातायातमा गीत संगीतकै कारणले दुर्घटना बढेको निष्कर्श गैरजिम्मेवार र अवैज्ञानिक भएको दावी गरेका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्,‘तिम्रो यो नियम लागू भएपछि पनि दुर्घटना भयो भने तिमीलार्इ कार्वाही गर्ने कि नगर्ने ? यति गैरजिम्मेवार अवैज्ञानिक सोँच कहाँबाट आउँछ ? स्रष्टाको पसिना खाने तिम्रो दाउ सफल हुने छैन।’
म्युजिकमा चालकको ध्यान जाँदा गाडी दुर्घटना हुने गरेको विभिन्न अध्यायनले देखाएकाले म्युजिक सिस्टम नराख्न निर्देशन दिएको यातायात व्यवस्था विभागको दावी छ।
गाडीमा गीत बजाउँदा र गीत परिवर्तन गर्दा चालकको ध्यान सवारीबाट बाहिर गएर दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यस्तो नियम लागू गरिएको विभागको भनाई छ।
विभागका अनुसार गाडीमा राखिएका सजावटका सामग्रीले चालकको ध्यान अनेत्रै पुर्याउने अध्यायबाट देखिएकाले यस्तो नियम ल्याउनुपरेको हो। सार्वजनिक गाडीमा अनावश्यक फोटो, स्टिकर नटाँस्न र साहित्य नलेख्न पनि विभागले निर्देशन गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित यातायात समितिका कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने गाडी चालकलाई सवारी जाँचपास नदिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
पहिलो चरणमा यो नियम सार्वजनिक गाडीमा मात्रै लागु हुने विभागले बताएको छ। केही समयपछि निजी सवारीसाधानमा पनि उक्त नियम लागू गर्ने विभागले बताएको छ। यसका साथै चालकले जुत्ता नलगाएर सवारी चलाएमा पनि कारबाही गर्ने विभागले बताएको छ।
चप्पल लगाएर गाडी चलाउँदा दुर्घटना हुने देखिएकाले अब अनिवार्य जुत्ता लगाउनु पर्ने विभागको निर्देशन छ। विभागको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने चालकलाई पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने बताइएको छ।